England Premier League - BBC News Somali
14 Agoosto 2010
Image caption Astaanka premier league
Ciyaarta ku qorsheysan magaalada London oo kooxda Tottenham ay ku martigalin doonto istaadiyaha White Hart Lane kooxda Manchester City, ayaa lagu furi doona horyaalka Premier League, oo horyaalnimadiisa ay difaaceyso Chelsea.
Labada koox ee haddaba furaya xilli ciyaareedka 2010-2011, Tottenham iyo Manchester City waa labadii koox ee horyaalkii la soo dhaafay, ku dagaalamay booski u dambeeyey ee Champions League, oo aakhirkii ay ku guleysatay Tottenham, oo horyaalka ka gashay kaalinta affaraad, taasi oo ka dhigneed ka qeybgalka isreebreebka hordhaca ah ee Champions League, oo la qaban doono bishan Agoosto 17. waxay Tottenham ay marti u noqon doonto kooxda switzerland Young Boys.
Manchester City, oo haddaba ku guuldarreysatay hamigeedii ugu weynaa ee ahaa in ay ka qeybgasho Champions League, waxaa sannadkan kharaj badan ay ku bixisay soo gadashada laacibiin culus.
Image caption Mario Balotelli
Ciyaartoygii u dambeyey oo heshiis ay la saxiixatay waa Mario Balotelli, oo loogu yeero SuperMario oo ah weeraryahan Talyaani ah oo asal ahaan ka soo jeeda Ghana oo u ciyaari jiray kooxda Inter. Manchester City, waxaa ay ka bixisay Balotelli lacag dhan 28 million oo Euro.
Man City waxa hore ey u soo gadatay David Silva oo ka tirsanaa Valencia, Jerome Boateng oo ah difaaca xulka qaranka Jarmalka, Yaxya Toure oo khadka dhexe ugu ciyaari jiray Barcelona. Waxaa kaloo ay kala wareegtay kooxda Talyaaniga ee Lazio Alexander Kolarov.
Laacibka u dambeeya, oo tababaraha Manchester City Roberto Mancini uu damacsan yahay in uu soo xareysto, waa James Milner oo khadka dhexe uga ciyaara Aston Villa.
Ujeedada ugu weyn ee Manchester City waxa ay tahay in markakan ay xoogga saarto sidii ay u qaadi laheyd horyaalnimada Premier League, oo lixdi sanadood ee dambeeyey ay isku badbadaleen Chelsea iyo Manchester United, oo walina ah labada koox ee u sharraxan horyaalnimada.
Si kastaba ha ahaatee, marka la fiiriyo awoodda ciyaartoyda cusub oo ay xareystay, ayaa Manchester City waxaa lagu tilmaamay in ay tahay kooxda saddexaad oo u hanqal taagi karta in ay noqoto horyaalka Ingiriiska, oo waxaaba la qabaa in ay ka awood badan tahay kooxaha kale ee taarikhda weyn ku leh Premier League ee Arsenal iyo Liverpool.
Ciyaarta haddaba maantay lagu furaayo tartanka horyaalka Ingiriiska Premier League, waa ciyaar fiiro gaar ah ay u yeelanayaan kooxaha waaweyn ee Ingriiska, si loo arko awoodda Manchester City.
Kooxda Tottenham, dhaqdhaqaaqyo sidaasi u weyn kama sameynin suuqyada kala iibsiga ciyartoyada.
Waxaa laakin ay rabtaa in ay xoojiso afka hore iyadoo qalqaalo ugu jirta Ashley Young, oo u ciyaara Aston Villa, iyo Craig Bellamy weeraryahanka Manchester City.
Tartamada kale ee Sabtida
Ciyaaraha kale ee Premier-ka ee maantay qorsheysa waxa ay kala yihiin: Aston Villa oo la kulmi doonta West Ham. Blackburn, waxay martigalinaysaa Everton. Bolton waxay is arki doonan Fulham.
Sunderland waxay isku soo aadeen Birmingham. Wigan waxaa marti u ah Blackpool. Wolverhampton waxay la kulmi doonta Stoke.
Ciyaarta u dambeysa ee galabtay qorsheysan, waxay ka dhici doonta Stamford Bridge halkaas oo Chelsea ay ku qaabili doonto West Brom.
Berri oo axad ah waxaa gegida Anfield ku kulmi doona Liverpool iyo Arsenal.
Habeenka Isniintana Manchester United waxay istaadiyaheeda Old Trafford ku martigalin doontaa Newcastle.